‘मिस नेपाल’का विजेता भन्छन् : ताजको इज्जत राख्छौं – Online National Network
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०१:५४
देशका फरक-फरक स्थानबाट आएका २५ जना सुन्दरीले आफ्नो सपनाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । करिब ७ हप्ता लामो तालिमबाट खारिएका उनीहरु कोहीभन्दा कोही कम थिएनन् । तर, उनीहरुमध्ये ४ जनाको सपनाको ढोका खुलेको छ ।
सरकारले साथ दिए ताज चाडै नै नेपाल ल्याउँछौ
श्रृङ्खला खतिवडा(मिस नेपाल वर्ल्ड )
मिस नेपाल वर्ल्डकी विजेता श्रृङ्खला खतिवडालाई हामीले सोध्यौ, तपाईंले मंगलबार बेलुकी के सपना देख्नुभएको थियो ? जसमा खतिवडाले भनिन्-‘म त निदाएर सपना देख्दिनँ । निदाएर देखिएका सपनाहरुको भर मलाई लाग्दैन ।’
आँखाले देखेको सपना र जिन्दगीको सपनामा के फरक हुने रहेछ ? श्रृङ्खला भन्छिन्-‘आँखाले देखेका सपना सपना मात्र हुन् । तर, जिन्दगीले देखेका सपनाहरुका लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ । यो ताज जितौ भन्ने सपना जिन्दगीले देखेको थियो, त्यो पूरा भयो ।’
श्रृङ्खलाले अगाडि थप्दै भनिन्-‘हामी त यो ताज लगाएर सिंगो नेपाली महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दैछौ । हरेक महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी विदेशमा जाँदैछौ । हामी त उहाँहरुको प्रतिनिधि पात्र मात्र हौ ।’
तपाई २५ जनाकी सुन्दरी हो कि नेपालकै सुन्दरी ? श्रृङ्खलाले यो प्रश्नमा भनिन्-‘हेर्नुहोस्, २५ जना कसरी छानिए भन्ने मुख्य कुरा हो । हामी देशका विभिन्न ८ स्थानबाट अडिसन दिएर हामी आएका हौ ।’
तपाईंलाई किन आफूले यो टाइटल जिते भन्ने लाग्छ ? खतिवडा भन्छिन्-‘मैले जिन्दगीमा एउटा दायित्व लिएर आएकी हुँ । त्यो दायित्व पुरा गर्ने योग्यता ममा निर्णायकहरुले देख्नुभएको होला । म आर्किटेकको विद्यार्थी पनि हुँ । म यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छु । सायद निर्णायकलाई मेरो यो कुराले छोयो होला ।’
केही समय अगाडिसम्म कम्युनिष्टहरुले ‘मिस नेपाल’को विरोध गर्थे, तर अहिले कम्यूनिष्टकी छोरी नै मिस नेपाल हुनुभयो । के कम्यूनिष्टहरु बदलिएका हुन् ?
श्रृङ्खला भन्छिन्-‘म त यसलाई सकारात्मक परिवर्तन मान्छु । मिस नेपाल भनेको बाहिरी सौन्दर्य होइन । मिस नेपालमा आएपछि हामीलाई धेरैले चिन्नुभयो । अहिले समाजका लागि जति कुरामा आवाज उठाउनुपर्ने छ, म त्यो कुरामा आवाज उठाउनेछु ।’